Taliska Millateriga Itoobiya oo Si adag uga Hadlay Saldhig la sheegay in Masar ka doonayso Somaliland | Aftahan News
Taliska Millateriga Itoobiya oo Si adag uga Hadlay Saldhig la sheegay in Masar ka doonayso Somaliland
Addis Ababa (Aftahannews)- Taliska Milletariga Dawladda Federaalka Itoobiya, ayaa ka hadlay Khilaafka ka dhashay Saldhig Millateri oo la sheegay inay dowladda Masar weydiisatay Somaliland oo ay dhulkeeda ka doonayso, kaas oo ay Itoobiya ku tilmaantay inuu halis ku yahay amniga gobolka.
Sidoo kale, Taliska Millateriga Itoobiya, waxa uu ka hadlay Biyo-xidheenka Abaay ee Itoobiya ka dul dhistay Webiga Niil, kaasi oo Dawladda Masar diiddan tahay.
Taliye ku-xigeenka ayaa ugu horrayn la waydiiyey su’aal u dhignayd sidan “Dawladda Masar, Arrimaha aynu isku hayno awgeed waxay u soo guurtay Mandaqadda Geeska Afrika, waxayna doonayaan inay Saldhig Ciidan waydiistaan Somaliland, taana Somaliland jawaab bay ka bixisay, Adigu sideed arrintaas u aragtaan ?
Taliye ku-xigeenka oo Su’aashaa ka jawaabayaana wuxuu yidhi “Arrintani arrin cusub maaha, 400 sano ee aynu ka soo gudubnay Masaaridu waa istaraatiijiyad ay ku dhaqmi jirtay, dagaalo ay si dadban noola gashay, taasna guul-darro ayay kala kulantay. Ta labaad Qorshaheeda 400 sano ka hor hadday ku fashilantay, 400 sano ka dib, wax badan baa isbeddelay (Adduunka), haddii aan iyaga ahay Istaraatiijiyaddaa gabowday waan beddeli lahaa, taasi oo ku salaysan dagaal, maxaa yeelay Waddamadii dhaqaale ahaan way isbeddeleen, Bulshada ayaa is beddeshay, siyaasaddii ayaa isbeddeshay, Tiknoojiyadda, sidaasi darteed Istaraatiijaddaa gabowday ee dagaalka ku salaysan inay beddesho ayay ahayd, Waayo? Istaraatiijiyaddaa gabowday u saamixi mayso inay yeelato Maamulka Biyaha Webiga Wiil.”
General Berhanu Jula wuxuu sheegay oo kale “Webiga Abaay, Mulki ahaan cidda iska leh waa Annaga (Itoobiya) inuu dal kale iska soo boodo oo uu Lahaanshiyihiisa sheegto dhicimayso, Lahaanshiyaha Itoobiya ee Abaay way Caddahay, Masaaridu si kasta oo ay dagaal isugu dayaan ka macaashi maayaan.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa sii raaciyey “Imaanshiyaha Masaarida ee Mandaqadda, gaar ahaan Somaliland waa isku daygii ugu dambeeyay ee lagu hakinayey Wejiga koowaad ee buuxinta Biyo-xidheenka, taasna way ku fashilmeen, Waayo? Somaliland mowqifkeeda way caddaysay.”